काठमाडौं । ‘कहीँ नभएको जात्रा, हाडी गाउँमा’ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ । काठमाडौंको पश्चिमी भेगमा रहेको नागार्जुन नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले केही दिनअघि जात्रा देखाएका छन् ।
जाडो सकिएर गर्मी मौसम भित्रिनै लाग्दा नागार्जुन नगरपालिकाको दुई वडाले वृद्धवृद्धाहरूका निम्ति सिरक वितरण गरेका छन् । जाडोका लागि वितरण गर्नुपर्ने सिरक गर्मी लाग्ने बेलामा किन वितरण गरियो ? आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
गएको आइतबार प्रदेशसभाका सांसद प्रकाश श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा ती दुई वडामा सिरक वितरण गरिएको हो । सांसद श्रेष्ठले पहिलो दिन वडा २ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्धवृद्धालाई सिरक वितरण गरेका थिए भने पछिल्लो दिन वडा ३ का वृद्धवृद्धालाई सिरक वितरण गरिएको थियो ।
ती दुवै वडामा नगरपालिकाको बजेटबाट सिरक वितरण गरिएको हो । अहिले सो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत मेयर छन् । तर, मेयरमा कांगे्रसले जिते पनि बहुमत भने नेकपाकै छ । नेकपाकी सुशीला अधिकारी उपमेयर छिन् भने बहुमत वडामा नेकपाकै अध्यक्षहरूले जितेका छन् । बोर्डमा पनि नेकपाकै बहुमत छ ।
जाडो सकिनै लाग्दा वृद्धवृद्धालाई सिरक वितरण गर्ने ती दुवै वडामा पनि नेकपाले नै चुनाव जितेका छन् । तर, जाडो लाग्ने बेलामा वितरण गर्नुपर्ने सिरक नगरपालिकाले किन गर्मी मौसम सुरु हुने बेला वितरण ग¥यो ? सबै चकित परेका छन् ।